Ukubetha iPenthouse ngePool yabucala yokuPhla - I-Airbnb
Ukubetha iPenthouse ngePool yabucala yokuPhla
Ungarhoxa simahla ngaphambi kwe-8 Okt.
I-Penthouse yethu yobunewunewu ikwilali eqhelekileyo yaseNerul, ejongene namasimi epaddy kunye noMlambo iNerul. Inegumbi lokulala elineembono ezintle. Igumbi lokulala liza negumbi lokuhlambela le-en-suite. Kukwakho nekhitshi elithambileyo nelilungiswe kakuhle elinezixhobo zangoku kwaye lixhotyiswe ngokupheleleyo ngazo zonke izinto ezibalulekileyo. Elona candelo lilungileyo lale Penthouse lichibi elihle lokuntywila, ukuze uyisebenzise ngasese, kunye nethafa elithandekayo nelibanzi ukonwabela ukutshona kwelanga kumangalisayo. Indawo yothando egqibeleleyo!
Indawo yethu yokugcina izinto zobunewunewu iPenthouse ikwidolophana encinci yaseNerul kumantla weGoa, ejonge amasimi amahle ootata kunye neendawo eziluhlaza. Ii-loft zilungele indalo, zisebenzisa izinto ezisetyenziswa ekuhlaleni kunye namalaphu.
Igumbi lokulala elihonjiswe kakuhle livuleke gqitha linegumbi lokuhlambela elinomnyango ophumela ngaphandle. Igumbi lokulala linendawo yokugcina izinto zakho.
Kukho negumbi elahlukileyo lokutyibiliza emkhenkceni kwiflethi.
Iflethi inekhitshi elisebenza ngokupheleleyo, kuquka i-microwave, iketile, i-toaster kunye nefriji. Ikwagcwele iseti epheleleyo ye-crockery, i- cutlery kunye neentlobo ezahlukeneyo zeglasi-iiglasi zeglasi, iifleshi ze-champagne, iijusi kunye neekomityi zekofu.
Ukuba ungathanda ukupheka, siye safaka izixhobo zasekhitshini, iimbiza neepani ecaleni kwezinto ezinokusetyenziswa eziqhelekileyo.
Ngaphandle kwendawo yakho yokuhlala, uza kukwazi ukufikelela kwipuli ebonakala ingenasiphelo nendawo yokuphumla ephandle efumanekayo kuzo zonke iindwendwe zethu.
Kukho nomatshini wokuhlamba impahla nendawo yokomisa iimpahla. Ukuba ungathanda ukuba nantoni na eyomileyo, nceda uqhagamshelane nendawo yethu yokwamkela iindwendwe. Sisebenza nomthengisi ococayo wasekuhlaleni nowokuhlamba iimpahla oza kukwazi ukwanelisa iimfuno zakho kusuku olunye.
Sisebenzisa ii-solar geysers kuwo onke amanzi ashushu kunye nezibane ezishushu zisinceda sigcine umbane. Ezinye zezinto zeglasi nazo (iitshefu zamanzi kunye nee-ashtrays) zenziwe ngeebhotile zebhiya ezisetyenziswa kwakhona! La ngamanyathelo ethu amancinci kodwa abalulekileyo ekunciphiseni ungcoliseko lwe-carbon dioxide.
IPenthouse ikwindawo enoxolo yaseNerul, ejikelezwe ziilali zabakhenkethi zaseSinquerim naseCandolim, nto leyo eyenza ukuba ibe yindawo eyaziwayo yabakhenkethi.
Ezinye iindawo ezaziwa kakhulu ziquka iCandolim Beach, iReis Magos Fort kunye neTaj Fort Aguada.
Indawo esembindini kodwa yabucala ye-penthouse, iyenza ibe yindawo efanelekileyo yokuphumla kunye nokuphumla ngokufikelela ngokulula kuzo zonke iindawo ezinomtsalane zabakhenkethi.
Umncedisi wam kunye nam siya kunxibelelana nawe rhoqo ngayo nayiphi na imibuzo okanye uncedo ukuba luyafuneka.
Sikwanayo nedesika yangaphambili enobuhlobo! Nceda uzive ukhululekile ukufikelela kumphathi wethu nangaliphi na ixesha phakathi kwe-10am kunye ne-6pm.
Umphathi wedesika yangaphambili liziko lalo lonke ulwazi kunye namalungiselelo-anokukunceda ukuba ubhukishe iikhabhi, ukuqasha imoto / ibhayisekile, wenze ubhukisho kwindawo yokutyela.
Sikwanayo nedesika yangaphambili enobuhlobo! Nceda uzive u…